အတုတှမြေားလာတဲ့ခတျေမှာ မတ်ေတာတရားအစဈတှလေဲ ရှားခဲ့တယျ - ONE DAILY MEDIA
သစ်စာတရားတှဆေို ဘယျနားမှနျးမသိတော့ဘူး အခဈြစဈဆိုတာလဲ မသိသလောကျနီးပါးပါပဲ ခတျေနဲ့ အညီ ဆိုတဲ့စကားလုံးတှအေောကျမှာ တိုးတကျလာတဲ့ ခတျေရစေီးကွောငျးတှနေောကျမှာ တဖွေးဖွေး လုံးပါးပါးလာခဲ့တာပါ
ခဈြတယျလို့ ပွောတဲ့အခါ . . . ရငျခုနျဖို့ထကျ ဟုတျမှ ဟုတျရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှတေဈသီကွီး ခေါငျးထဲပျေါလာခဲ့တယျ . . . ဆကျပွီးမတှေးဖွဈတော့ဘူး အရမျးကွီး မခံစားဖွဈတော့ဘူး ။မတ်ေတာဆိုတာ ဖွူစငျတဲ့ သဘောပါ ။ အေးခမျြးခွငျးကို ဆောငျတယျ ပွီးတော့ အတုအယောငျတှသော ပေါတယျ ပူလောငျရတယျ ငို​ကွှေးရတယျဆိုရငျ အဲ့တာ မတ်ေတာ မဟုတျတော့ဘူး အတ်တတှရေောထားတဲ့ ၀ဋျကွှေးသာသာပါ ။
မတ်ေတာအစဈအမှနျတှေ ပေးတတျတဲ့လူတှကေပြွနျတော့လဲ တနျဖိုးမထားတတျတဲ့လူတှလေကျထဲမှာ အရောငျတှေ မှိနျပဈလိုကျရတာမြိုးလေ ။ မတ်ေတာကို မတ်ေတာမှနျး နားလညျသဘောမပေါကျကွတော့ဘူး အနိုငျယူမယျ လှောငျရယျမယျ ခနြငျးမယျ ကိုယျ့အတှကျကိုယျပဲ ကွညျ့တတျကွတော့တာ နရေောငျဟာ ကြောကျဆောငျကိုထိုးလို့ အလငျးပွနျလာရိုး ထုံးစံမရှိသလို မတ်ေတာကလဲ နားမလညျသူ တနျဖိုးမထားတဲ့သူကို ပေးလို့ ပွနျလာရိုး ထုံးစံမရှိပါဘူး ။
လူတှကေ အပျေါယံတှကေို ပိုပွီး ခုံမငျတတျကွတယျလေ ။ အပွောခြိုခြိုလေးတှေ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှေ နဲ့ အပွောကောငျးမှ စတေနာထားတယျလို့ ထငျတတျကွတာမြိုးလေ တကယျ့စတေနာစကားတှကြေ နားခါးတယျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ အတုအယောငျတှမှောသာ ပိုပွီး သာယာတတျကွတာလေ မုသားလေး နဲနဲရောထားတဲ့စကားမှ အမှနျတရားလို့ ယုံကွညျတတျကွတာ တကယျ့အမှနျတရားဆိုတာကတြော့ လကျခံခငျြကွတာမဟုတျဘူး မှနျတာမြားလှနျးရငျ မကောငျးတောငျ အထငျခံရတတျသေးတာ ဒါလဲ ထုံးစံပါပဲ ဖွောငျ့လှနျးတဲ့အပငျက အရငျဆုံးအခုတျခံရတာ သဘာဝပဲလေ
ကိုယျ့အနားကလူတှကေိုလဲ တဈထဈခယြုံကွညျဖို့ ခကျခဲလာတယျ ပုခုံးဖကျပေါငျးနတေိုငျး မိတျဆှကေောငျးလို့ သတျမှတျထားလို့မရတော့ဘူးလေ နောကျကြောကို ဓားထိုးတတျတဲ့လကျတှကေ အဲ့ဒီလကျတှပေဲ ဖွဈနတေတျလှနျးလို့ အတုတှပေေါတဲ့ ခတျေပါ ။ မတ်ေတာစဈစဈတှေ အခဈြစဈစဈတှေ အားလုံး အတ်တတှေ ရောနပေါပွီ ဘယျအရာကိုမှ မကျြစိစုံမှိတျပွီး ယုံကွညျလို့ မရတော့ဘူး ။ပွီးတော့ အစဈတှေ ပေးနလေို့လဲ ပွနျရလိမျ့မယျလို့ တရားသတှေကျထှကျလို့ မရဘူး
ကိုယျပေးတဲ့ မတ်ေတာတှကေ စဈမှနျပါလကျြနဲ့ ကိုယျထားတဲ့ စတေနာတှကေ ဖွူစငျနလေကျြနဲ့ ပွနျပွီး ရောငျပွနျမဟပျတာ ကိုယျ့ပေးတဲ့သူ မှားနလေို့ဆိုတာ သတိပွုပါ တနျဖိုးဘယျလောကျရှိရှိပါ တနျဖိုးကို သိမှတနျဖိုးကို နားလညျတတျတာမြိုးလေ ။
ချစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ . . . ရင်ခုန်ဖို့ထက် ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေတစ်သီကြီး ခေါင်းထဲပေါ်လာခဲ့တယ် . . . ဆက်ပြီးမတွေးဖြစ်တော့ဘူး အရမ်းကြီး မခံစားဖြစ်တော့ဘူး ။မေတ္တာဆိုတာ ဖြူစင်တဲ့ သဘောပါ ။ အေးချမ်းခြင်းကို ဆောင်တယ် ပြီးတော့ အတုအယောင်တွေသာ ပေါတယ် ပူလောင်ရတယ် ငို​ကြွေးရတယ်ဆိုရင် အဲ့တာ မေတ္တာ မဟုတ်တော့ဘူး အတ္တတွေရောထားတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးသာသာပါ ။
မေတ္တာအစစ်အမှန်တွေ ပေးတတ်တဲ့လူတွေကျပြန်တော့လဲ တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူတွေလက်ထဲမှာ အရောင်တွေ မှိန်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးလေ ။ မေတ္တာကို မေတ္တာမှန်း နားလည်သဘောမပေါက်ကြတော့ဘူး အနိုင်ယူမယ် လှောင်ရယ်မယ် ချနင်းမယ် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲ ကြည့်တတ်ကြတော့တာ နေရောင်ဟာ ကျောက်ဆောင်ကိုထိုးလို့ အလင်းပြန်လာရိုး ထုံးစံမရှိသလို မေတ္တာကလဲ နားမလည်သူ တန်ဖိုးမထားတဲ့သူကို ပေးလို့ ပြန်လာရိုး ထုံးစံမရှိပါဘူး ။
လူတွေက အပေါ်ယံတွေကို ပိုပြီး ခုံမင်တတ်ကြတယ်လေ ။ အပြောချိုချိုလေးတွေ အပြုံးချိုချိုလေးတွေ နဲ့ အပြောကောင်းမှ စေတနာထားတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတာမျိုးလေ တကယ့်စေတနာစကားတွေကျ နားခါးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အတုအယောင်တွေမှာသာ ပိုပြီး သာယာတတ်ကြတာလေ မုသားလေး နဲနဲရောထားတဲ့စကားမှ အမှန်တရားလို့ ယုံကြည်တတ်ကြတာ တကယ့်အမှန်တရားဆိုတာကျတော့ လက်ခံချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး မှန်တာများလွန်းရင် မကောင်းတောင် အထင်ခံရတတ်သေးတာ ဒါလဲ ထုံးစံပါပဲ ဖြောင့်လွန်းတဲ့အပင်က အရင်ဆုံးအခုတ်ခံရတာ သဘာဝပဲလေ
ကိုယ့်အနားကလူတွေကိုလဲ တစ်ထစ်ချယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲလာတယ် ပုခုံးဖက်ပေါင်းနေတိုင်း မိတ်ဆွေကောင်းလို့ သတ်မှတ်ထားလို့မရတော့ဘူးလေ နောက်ကျောကို ဓားထိုးတတ်တဲ့လက်တွေက အဲ့ဒီလက်တွေပဲ ဖြစ်နေတတ်လွန်းလို့ အတုတွေပေါတဲ့ ခေတ်ပါ ။ မေတ္တာစစ်စစ်တွေ အချစ်စစ်စစ်တွေ အားလုံး အတ္တတွေ ရောနေပါပြီ ဘယ်အရာကိုမှ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ယုံကြည်လို့ မရတော့ဘူး ။ပြီးတော့ အစစ်တွေ ပေးနေလို့လဲ ပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ တရားသေတွက်ထွက်လို့ မရဘူး
ကိုယ်ပေးတဲ့ မေတ္တာတွေက စစ်မှန်ပါလျက်နဲ့ ကိုယ်ထားတဲ့ စေတနာတွေက ဖြူစင်နေလျက်နဲ့ ပြန်ပြီး ရောင်ပြန်မဟပ်တာ ကိုယ့်ပေးတဲ့သူ မှားနေလို့ဆိုတာ သတိပြုပါ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိရှိပါ တန်ဖိုးကို သိမှတန်ဖိုးကို နားလည်တတ်တာမျိုးလေ ။